IMicrosoft Edge ayisebenzi-indlela yokulungisa isikhangeli
ikhaya/Umkhangeli we-Edge/IMicrosoft Edge ayisebenzi-indlela yokulungisa isikhangeli
Vangelis14. Epreli 2021
IMicrosoft Edge ayisebenzi? Ngamaxesha athile, isikhangeli seMicrosoft Edge sinokungasebenzi. Nokuba ufumana umyalezo "u-Microsoft Edge uyekile ukusebenza" okanye awuphenduli. Apha kwesi sikhokelo ngenyathelo ngenyathelo siza kubonisa izisombululo ezininzi zokucebisa ukulungisa isikhangeli kwakhona.
IMicrosoft Edge ayisebenzi
1 IMicrosoft Edge ayisebenzi
2 Qala kabusha ikhompyutha
3 Phuma kwi-Edge Browser nge-Task Manager
4 Qinisekisa ukuba iMicrosoft Edge ihlaziyiwe
5 Sula imbali yokukhangela kunye nedatha kwi-cache
6 Ukulungisa iMicrosoft Edge Windows 10
7 Khipha i-Edge Browser
8 I-Antivirus ivimbele iMicrosoft Edge?
der Isikhangeli seMicrosoft Edge Iya isiba ngundaba-mlonyeni. Kungenzeka ukuba ngequbuliso ayisebenzi, iiwebhusayithi aziboniswanga ngokuchanekileyo okanye ayisenakuqala kwaphela.
Ukuba uneengxaki ngeMicrosoft Edge okanye iqhubeka nokubamba, zama ezi zisombululo zilandelayo:
Qala kabusha ikhompyutha
Into yokuqala ekufuneka uyenzile Qala kabusha iiWindows. Oku kuzakucima amangeniso angachanekanga.
Phuma kwi-Edge Browser nge-Task Manager
Cofa u iqhosha lasekunene le mouse kwi Ibar yomsebenzi ukuba kukho isithuba kwaye ukhethe kwimenyu yokuma "Umlawuli womsebenzi".
Ngoku khetha inkqubo "IMicrosoft Edge" kwaye ucofe apha ngezantsi "Phelisa umsebenzi".
Qinisekisa ukuba iMicrosoft Edge ihlaziyiwe
Kwibhrawuza evulekileyo cofa phezulu amanqaku amathathu athe tyaba kwaye ucofe enye emva kwenye Useto> Malunga neMicrosoft Edge. Ukuba uhlaziyo luyafumaneka, luya kufakelwa ngokuzenzekelayo.
Sula imbali yokukhangela kunye nedatha kwi-cache
Ukuya kuloo nto Ukucima idatha yokukhangela Ukwenza oku, yenza oku kulandelayo:
Qalisa ifayile ye- Umda webrawuza yeChromium.
Ngaphezulu, cofa u Amanqaku amathathu.
Ukuqhubela phambili ngasekhohlo, cofa Ukukhuselwa kwedatha kunye neenkonzo.
Kummandla Sula idatha yesikhangeli cofa ku "Khetha izinto eziza kucinywa ”.
Unokusebenzisa i Ibha yedilesi Faka oku kulandelayo: Umda: // useto / clearBrowserData
Kwiwindow evuliweyo usenokukhetha into ofuna ukuyicima:
• Imbali yesikhangeli
• Khuphela imbali
• Iicookies nezinye Idatha yewebhusayithi
Imifanekiso egciniweyo kunye neefayile
Kukhutshwe ngaphantsi kwe-4,5MB. Ezinye iiwebhusayithi zinokulayisha kancinci. Ngexesha elizayo xa ubabiza.
• Amagama agqithisiweyo
Ifom yedatha yokugcwalisa ngokuzenzekelayo (kubandakanya iifom kunye namakhadi)
Yonke idatha evela kuhlobo lwangaphambili lweMicrosoft Edge
Uya kunikwa ixesha lokucinywa kwedatha yesikhangeli. Ezi zilandelayo ziyafumaneka:
Iiyure ezingama-24 zokugqibela
Iintsuku ezi-7 zokugqibela
Iiveki ezi-4 zokugqibela
Ukulungisa iMicrosoft Edge Windows 10
Ukulungisa isikhangeli, qala ifayile 10 Windows izilungiselelo ngokukhethekileyo ngokudibanisa isitshixo Iifestile + i. Kwindawo "yeeNkqubo kunye neeMpawu" cofa kwindawo "IMicrosoft Edge" isiphelo. Khetha "tshintsha" apha. Nceda ukhethe oku kulandelayo:
Ukuba le app ayisebenzi kakuhle, kunokwenziwa iinzame zokuyilungisa. Idatha kwi-app ihlala ingachaphazeleki.
Cwangcisa kwakhona kokungagqibekanga
Ukuba iMicrosoft Edge ayisasebenzi kakuhle, setha kwakhona isikhangeli. Ngenxa yoko, ezinye iinkcukacha ezinjengembali yesikhangeli, izinto ozithandayo, iithebhu ozigcinele ixesha elizayo, useto kunye neicookies ziyagcinwa.
Khipha i-Edge Browser
Unokhetho lwe Khipha isiKhangeli seMicrosoft Edge. Senze ividiyo kwesi sihloko.
I-Antivirus ivimbele iMicrosoft Edge?
IMicrosoft Edge ayizukusebenza ukuba unenkqubo yeantivirus. Ukuba usebenzisa iWindows Defender, jonga useto phantsi "Useto> Uhlaziyo kunye noKhuseleko> Ukhuseleko lweWindows"> "I-Firewall kunye noKhuseleko lweNethiwekhi".
Fujitsu Esprimo Q920 0-Watt Intel Core i5 240GB SSD hard drive 8GB memory Windows 10 Pro Ishishini ... 92 ukalisho 177,00 yeEUR Thenga it e-Amazon
Windows 11 yabaqalayo kunye nabo batshintshayo: Inkqubo entsha yokusebenza esuka kuMicrosoft yabaqalayo kunye ... Okwangoku akukho zibuyekezo 14,95 yeEUR Thenga it e-Amazon
Incwadi yokuziqhelanisa yeWindows 11-iWindows entsha icaciswe ngokupheleleyo. Kubaqalayo kunye nabasebenzisi abaphambili Okwangoku akukho zibuyekezo 19,95 yeEUR Thenga it e-Amazon
Umkhangeli webrawuza utshintsha umbala kunye noyilo
Jonga amaphasiwedi agciniweyo kwi-Edge Chromium
Sebenzisa imowudi emnyama kwi-Edge Chromium (imowudi emnyama)
Cima idatha yesikhangeli kwi-Edge Susa ii-cookies zeChromium njl.
Cwangcisa iphepha lasekhaya leMicrosoft Edge Chromium
Khipha i-Edge Browser emva kohlaziyo olunyanzelisiweyo
Khipha kwaye uvimbe i-Edge Browser
Yenza ugcino lwekuki lusebenze kwiMicrosoft Edge
Thumela ngaphandle kwephasiwedi kwiMicrosoft Edge
IMicrosoft Edge ayisebenzi Lungisa iMicrosoft Edge
Funda iwebhusayithi ngokuvakalayo ngesikhangeli seMicrosoft Edge
6. Septemba 2021
Ukwenza isikhangeli kwi-Edge, iphepha lasekhaya, ukhuphelo; Izandiso
6. Epreli 2021
2. Epreli 2021
Sebenzisa ukurekhodwa kwewebhu kwi-Edge Chromium-nantsi indlela esebenza ngayo
16. Matshi 2021